IFTIINKACUSUB.COM: novembre 2016
Sheekadu waxay dhex martay Cabdi-kacaan oo ahaa madaxa xafiiska xidhiidhka dadweynaha ama hanuuninta ee degmada Berbera iyo nin ay saaxiib ahayeen ka hor intii aanu u hayaamin dalka Sucuudi Arabiya oo la odhan jiray Maxamed.
Sida ugu fudud ee lagu soo saari karo tirada qoyskaaga xisaab ahaan,iyada oo waliba qaacidadaa xisaabta ah ee la raacaayo ay ka muuqan doonto ,tirada Inamada iyo tan hablahaba .
Waxbarashadu waa furaha Nolosha, Aqoon la’aan waa iftiin la’aan.
waxay ku sugan yihiin xaalado aad u kala duwan oo dhanka nolosha ah , sidoo kale waxaan ognahay in dunida maanta
Dhabar xanuunka waxa keena iyo sida looga hortago .
Midawgii iyo kala go'ii dawladaha Sweden , Norway iyo Denmark.
Sanadadii u dhaxeeyey 800 iyo 1050 Kadib diinta Kristaanka ayaa lagu magacaabaa Waqtigii Vikinka (Vikintida). Biloowgii waqtiga vikinka Noorweey ma aheyd wadan, laakiin waxey ka koobneyd dhulal kala duwan oo leh boqoradiisa. Kolkeey taariikhdu aheyd 872 ayaa Ninkii Viking ahaa, boqor Harald Hårfagre ayaa ka noqdey boqor Noorweeyoo dhan.
Ciidanka Dab-damiska Caasimada Oo Gurmad Balaadhan Ka Galay Abaar Baaxadle Oo Soo Gaadhay Degmada Sabawanaag.
Hargeysa(Qarni)-Ciidanka Dab-damiska Caasimada Hargeysa ayaa Gurmad baaxadle oo biyo dhaamin ah la gaadhay dadweynaha Deegaanka Bederwanaag oo 40KM kaga beegan dhanka Koonfur barri magaalada Hargeysa oo mudooyinkii ugu danbeeyey saamaysay isla markaana ay soo gaadhaysay Abaarta baaxada leh ee ku habsatay dhamaan Gobolada Barriga iyo badhtamaha Somaliland
Nin ku dooday in Xabsiga mooyaane aanu meelkale ku noolaan karayn!
Waligaa ma aragtay qof xabsigu uu u noqday hoygiisa rasmiga ah,iskana diiday in uu xabsiga ama Jeelka uu dibada uga soo baxo ,kadib markii uu u dhamaaday xadhigii lagu xukumay, isaga oo ay da-diisu ay ahayd mid aad u yar.
Facbook ayaa ku sheegay qofka aad tahay .WQ/Khadar Aar.
Qofkasta oo Facbook lihi ,ha ogaado in Facbookisu uu yahay meesha kaliya ee lagu ogaado lagana qiimeeyo ,qofka aqoontisa, garashadiisa iyo dhamaan akhlaaqiyaadkiisu inta ay gaadhsiisan yihiin.
Ma og-tahay in ,goobta Dumarka timaha loogu hagaajiyo iyo kuwa Raggu ,ay isku mid yihiin ,balse ma lasocotaa in midna Gun lagu noqdo midna Gob ,waa maxay sababtu.
Maxay ayaa labada goobood midna ka dhigay shaqo lagu gumoobo oo ay dad gaar ahi qabtaan ,midna ka dhigay shaqo lagu faano ,timaha ragga iyo kuwa dumarku maxay ayay ku kala duwan yihiin.
Waligaa qofkale haysu eekaysiin hana iska dhigin,adigu waxa aad noqotaa adiga,hadii kale waxa ay dadku kuu arkayaan in aad isu eekaysiinayso qofkale,kadibna waxa ay dawanayaan waa qofkii kale ,adiguna meesha waad ka maqnaanaysaa.
Siyasadu waa suldaaro,waligaa ha aminin nin siyaasi ah saxiibkaba ha ahaadee,taas macnaheedu maaha in aan uga jeedo ,siyaasadu waa wax xun, siyasiguna waa mid dulmi badan oo aan la aamini karin.
Waxaa baryahan inagu soo badanaaya gaar ahaan baraha warbaahinta sida WhatsApp iyo Facbooka iwm ,qoraalo dadka loogu sheegaayo in hadii ay Tawxiidka Ilahay لا إله إلا الله ,5-10-12- iwm ay ku cel-celiyaan in 5 ama 10 casho gudahood ay ku heli doonaan wixii ay u baahnayeen.
Maxaa Marxuumiinta dhintay loogu magac.daraa koob ciyareed-ka ??
Waxaa baryahan caado inoo noqotay,wax la yidhaahdo koobka cayaraha ee loo qabto marxuum hebel midkuu doono ha ahaadee , waxa aad moodaa in dhaqan kaasi uu aad onoogu sii fidaayo,
‘Mustaqbalka Madow ee ku gedaaaman Bulshada Somaliland, waxa sabab u ah Dabar-goynta dhirta iyo ka faa’idaysi la’aanta Biyaha Roobka..
Gurmad intee le’eeg ayey dawladdu u fidisay dadka ay abaartu saameysay, Maxayse halmaantay?
Dunidan aynu ku nool nahay ,dadku waxbay iswaydiiyaan haday koox yihiin iyo hadii ay qof qof yihiinba,xaq waxa lagugu leeyahay hadii su'aal lagu wadiiyo oo aad garanayso in aad si degan uga jawaabto.
Iskuulka amma dugsigu waa goob wax lagu barto isla markana lagala socdo dhibaatoyinka iyo mushkiladaha dadka badan kiisa haysta,iskuulku waa goob ay waalidiintu geeyaan caruurtooda si ay wax uga soo fa'idaystaan.
Dalka Vietnam waxa ka dhacday sheeko yaab badan oo indhaha caalamka soo jiidatay , lamaane is qaba ayaa waxa soo kala dhexglaya shaki ku saabsan laba maataano ah oo wiilaal ah oo ay dhaleen,
Taariikh kooban oo ka hadlaysa, Abwaan Nageeye Cali Khaliif (Safiirka)
Abwaan Nageeye Cali Khaliif (Safiirka) Oo Uu Dhalay Caaqil Cali Khaliif Yuusuf Waxa Sida Qiyaastu Tahay 16th June 1992 Uu Ku Dhashay Agagaarka Degmada Darroor, Gobolka Dhagaxbuur, DDSI.
Nolosha iyo Geeriduba dhamaantood waxa ay ku jirtaa Gacanta Ilahay sw,ma jirto hadii ay Geeridu ku maagto cid kaa hor marinkarta amma kaa dib dhigi karta, xiligii lagugu tala galay,waana mida aynu rumaysan-nahay hadii aynu nahay Muslimiin.
Hadii aanad aduunka wax badan oo dhacaya aadan kala socon,way adag tahay in ay noloshaada uu dhami ay taam noqoto, amma aad hesho nolol xayaato iyo farxad dheerada leh.
Daruur lagu amray in ay waraabiso nin saalix ah beertiisa.
Muslim ayaa ka wariyay Abuu Hureyra in uu Nabigu (scw) yidhii: iyada oo nin ku sugan yahay dhul bannaan ayuu daruur ka dhexmaqlay cod dhahaya: waraabi beerta hebel, markaas ayaa daruurtii yara leexatay oo biyeheedii ku shubtay meel shiila madaw ah,
Aboowe haygu odhan,adigaa Aboowe iyo wax ka xunba ahe!
Wakhtigan aynu ku jiro waxa aad mooda in dadku ay hayaan ugu jiraan sidii ay u gaadhi lahayeen wadamada Yurub iwm,dadka safaradaasi ku jiraa Somalida oo kaliya maahan ,balse waxa aad moodaa in dunida oo dhami ay fikirka hayaanka wada qabaan.
Hadaba wadamadan marka aad timaado shayga ugu muhiimsan ee laga helaa waxa uu yahay sharciga wadanka aad ka hesho
Waa maxay sababta ay raga iyo dumarku u kala Lacag badan yihiin?
Golaha Dhaqaalaha ee Dunida (WEF ), ayaa aaminsan iney qaadan doonto 118 sano oo kale, ama illaa iyo sanadda 2133, marka dunidu ay ugu danbeyn buuxin doonto farqiga u dhexeeya Ragga iyo Dumarka.
Xisbiga Kulmiye kasoo bax ,Wadani ayaa ku daahirinayee !
Waagii baryaaba waayo leh ,aroor kasta oo aad soo toostana waxa aad arkaysaa war iyo wacaal iyo wax kugu cusun oo ku yaab galiya ,layaabi maayo oo nolosha oo dhan ayaa qaabkaas Ilahay ugu tala-galay.
Qaybtii 3-aad Qisooyinkan noocan ahi ,waa kuwo ku badan inta badan in ay bulshada ka dhex dhacaan,isla markaasi waxa ay u baahan yihiin in casharo laga barto,balse aan sheeko ahaan amma madadaalo aan loo qaadan.
Wiilka Siilaanyo sodoga u yahay ,Baashe Cawil ,ninka Moorgan u bixiyay Moorgan ma yaqaano!
Waxa aad inta badan baraha warbaahinta ku arkaysaa, qoraalo iyo hadalo lagu duraayo Baashe Cawil Cumar oo uu sodog u yahay Madaxwane Axmed Siilaanyo ,Baashe waxa ay warbahintu ugu yeedhaa naanaysta aanu u qalmin ee ,Baashe Moorgan amma Moorgan.
Qaybtii 2-aad .waxana inoo waramaaya gabadhii ay sheekadani ku dhacday.
Waxa aan ogaysiinaya dadka sheekadan akhrista in ay ka heli doonaan kana fa'idaysan donaan dhacdoyin isdaba joog ah oo inta badan ka yimaada xiliga guurka bulshadeena dhexdeeda.
Ninkii i guursaday, wax walba oo noloshiisa ah, waa uu iga qariyey !WQ/ Khadar Aar .
Waxa aan ahay gabadh dhalinyaro ah ,isla markaas uun qaan gaadhay,in kastoo sida aan jeclaa aanan lasoo korin abahay iyo hoyaday ,hadana waxa aan kusoo koray nolol aan dhibaato lahayn,waxaana isoo korisay eedaday macaan ,madama aniga reerkayagu uu ahaa reer miyo.
BismiAllah, magaca Ilaahaybaan ku bilaabaynaa, Allahaas oo naxariista naxariis guud iyo naxariis gaar ahba. Mahaduna Ilaahaybay u sugnaatay, waxaanan ku sallinaynaa xabiibkeena Muxamed ilaahay naxariis iyo nabadgalyo korkiisa ha yeelee.
Ibliis hadii naar laga abuuray maxaa naar loogu cadaabi?
Bismillah, walaalayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekooyin xikmad iyo qosolba iskugu jira oo dadku aad u jeclaystaan, waxaanan qisooyinka ugu talo galnay inaad farxada Islaamka nala qaybsataan iyo inaan idiinka faa’idayno xikmadihii dadkii hore ee wanaagsanaa.
Damqashada Xanuunku waxay ku taala Haraga Bani-Aadamka.
Waagii hore Dadku waxay rumaysnaayeen in damqashada xanuunku ay ku koobantahay oo kaliya Maskaxda Bani-Aadamka. Hase ahaatee dhowaan waxa la ogaaday
LA YAAB: IPHONE 7 ayuu ku sigtey in uu Indhihiisa ku waayo!
Laba nin ayaa xabsiga la dhigay ka dib markii ay isku dayeen inay indhaha kala baxaan nin ay ka dheceen mobilekiisa nuuca iPhone 7 maadaama uu indhihiisa security ahaan ugu xiray.
Turjumaano ayay u baahan yihiin dadka somalida qaarkood!
Somalidu wali waxaa jiray dad aan dhinaca lahjada Somaliga aan si fiican isugu fahmin, ,taasi oo keentay in dad badan oo dani ka dhaxayn lahayd ay is fahmi wayaan amma ay is af-garan wayaan ,mararka qaarkoodna ay u baahdaan cid u kala turjubaanta.
Geeridu amma dhimashadu wakhtiyada qaar waxa ay ahayd wax laga naxo,balse maanta waxa aad moodaa in ay tahay arin siyaabaha qaar loogu faano amma laga dhigto kaanbayn iyo ololayn dhinaca siyaasada.
Siyaasigu waa sixir qarsoon
Sirbuu kuu maleegayaa
Sasabada hadalkiisa wacan
Sax maaha warkiisu badi
Suryooyin weeye cakiran
Aduunka inta aad ku noo shahay waxkastaaba waa ay kusoo marayaan,waagii baryabana waxa uu kuu kordhinayaa waya'aragnimo iyo faham dheeraada ,taasi oo u bahan in lagu cibro qaato si loogaga badbaado waxa soo socda.
Xiliga abaarta casharo kama barano ,xiliga Roobka iyo Raxmadana kayd iyo biyo ma dhigano, aqoon yahan keenuna waa aqoon laawe.